Nzube, iwu, iwu na nyocha banyere egwuregwu niile - Ikkaro
Egwuregwu na-amasị onye ọ bụla. Na ezigbo bọọdụ egwuregwu. Ọ bụrụ na ị bụ egwuregwu egwuregwu, ngalaba a ga-amasị gị. Abụ m onye ọrụ ntụrụndụ dị mfe nke na-anwale ọtụtụ ihe.
Echiche bụ ịkekọrịta ngalaba ahụ n'ọtụtụ akụkụ. N'otu aka, nyochaa egwuregwu m na-anwale, n'aka nke ọzọ, okike nke egwuregwu na n'ikpeazụ ha ewu, oyiri, imepụta akụkụ, ihe akụrụngwa iji, wdg. Ihe niile N'onwe Gị site na egwuregwu.
Ugbu a ebe m nwere ahụmịhe kachasị bụ n'ịhọrọ ihe na usoro ụlọ maka ihe ndị nwere ike iji gbasaa, mepụta ma ọ bụ gbanwee egwuregwu.
Na mgbakwunye, a ga-enwe ohere maka akụkọ ihe mere eme, iwu, ozi na nkuzi maka owuwu mbadamba, iberibe, wdg nke egwuregwu dị iche iche anyị na-arụ, site na oge ochie Chess, Backgammon, Mankala, Puzzles n'ịntanetị, ruo n'oge a ndị.
Pụrụ iche ngalaba maka Bipute ma gwuo ;-)
Egwuregwu ọdịnala ọdịnala maka ihe omume n'èzí na nnọkọ
Ezutela m ugboro abụọ n'afọ a Egwuregwu ndị a ma ama na egwuregwu maka ụmụaka n'oge mmemme na ememme obodo. Ha bu egwuru-egwu ejiri osisi, ihe ndi di nkpa ma di mfe mana ha huru ha n'anya. Tofọdụ na-egwu naanị ha na ndị ọzọ na-eme ya abụọ ma ọ bụ otu
Achọrọ m ịrịgo ụfọdụ maka oge okpomọkụ ka m nwee ike igwu ụmụ m nwanyị na ụmụ nwanne m nwanyị, na-eji oke ọhịa ndị anyị nwere emebi emebi site n'èzí. Edemede a bụ mkpokọta nke ndị m nwee ike ịse foto na nke m chetara. O nwere ụbọchị enwere ọtụtụ mmadụ nke na anaghị m ewere foto. Na egwuregwu niile anyị nwere ike ịme ọtụtụ mgbanwe ma na iwu na ọdịiche na iwu. Ihe ndetu a bụ ihe ncheta.
Can nwere ike ịnwe ezigbo mgbatị ahụ na ihe a niile. Ana m ekewapụ egwuregwu ndị ahụ na 2, ndị nwere nka na ndị na - emezi ihe.
Iwu Jenga (Etu esi egwu Jenga)
Jenga Ejiri blọk osisi 54 rụọ ya, ogologo ya dị okpukpu atọ n'obosara. Nkanka na-stacked-eme elu. Floorlọ nke ọ bụla nwere mgbochi atọ, a na-etinyekwa ụlọ elu ya n'akụkụ ya. Ya mere na njedebe enwere ala 3. Mana nke a dị mma karịa karịa na oyiyi.
Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ masịrị gị, n'ezie ị ga-amasị Bausack
Ozugbo a wuru ụlọ elu ahụ, onye wuru ụlọ elu ahụ na-amalite egwuregwu ahụ. N'ebe a, mmegharị ahụ bụ iwere ihe mgbochi si n'ala ọ bụla ma debe ya nke ọma n'elu ụlọ elu ahụ. .
Rubik's cube 2 × 2 ga-ewu ụmụaka
Izu ole na ole gara aga, David, onye nkuzi ụlọ akwụkwọ elementrị, degara m akwụkwọ na-ajụ ma m nwere ike inyere ha aka na 2 × 2 rubik si cube design maka umuaka.
Ha chọrọ ime a mgbakọ na mwepụ maka ụmụaka gburugburu Rubik's cube . M zigara ya ngwa ngwa ka ọ rụọ magnetik rubik si cubes na dais, nke 2 × 2 na 3 × 3 ma mkpa ha dị iche ma ha jiri ogige dị mfe bịa.
Ndị na-eto eto 10 ga-ewu ya, yabụ anyị chefuru banyere usoro na usoro dị ukwuu ma dị egwu
ma ọ ghaghị ịbụ ọnụ ala, dịkwa ọnụ ala
n'agbanyeghị na ekwesịrị ikwu ihe niile, naanị ihe ha chọrọ bụ obere cube pere mpe.
Azịza m bụ nke a 2 × 2 Rubik si cube nke kaadiboodu na akwukwo magnetik Ma ọ bụrụ na ị na-eme maka otu klaasị ọ ga-efu € 1,5 kwa cube dịka, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme otu ị ga-aga € 3 ma ọ bụ € 4
Enigma nke asatọ asatọ nke chọrọ ịbụ 8
O teela anyị kwụsịrị izipụ ilu, ilu, egwuregwu, ma ọ bụ ihe onyonyo n’ụbọchị Fraịde. Nke a kwesịrị ịdị mfe n'ihi na ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Ajọ ihe ọjọọ nke mwepu nke 3
Maka gị ka ị nwee ezigbo ngwụcha izu, ana m ahapụrụ gị obere nsogbu mgbakọ na mwepụ na agbanyeghị na ọ naghị esiri ike ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme ka rubi 1x2x3 rubik
Rubik si Cube mbanye anataghị ikike na-egwu na a 3x2x1 cube Ọ bụ ihe, na-akpali nnọọ mmasị, ọ.
Esi mee ka a magnetik rubik si cube na dais
Ihe a masịrị gị magnetik Rubik si cube mere na dais?
Ọfọn, ime ya dị mfe karịa ka ọ dị ...
MIT - mkpọchi mkpọchi
Anyị na-agbakwunye nsụgharị nke MIT, akwụkwọ a na-ewere dị ka Lockpicking Akwụkwọ Nsọ.
Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ihe na-ada ka mma, ọ bụ a akwụkwọ dị oké mkpa maka mmalite na Ulo olu. Ọ bụ isiokwu na-adọta uche m. Ọ bụrụ na ị na-ekwu maka mkpọchi ọ nabatara kpamkpam, mana ọ bụrụ n'okwu mkpọchi pụtara, ọ dị ka ị ga-eme mpụ. Ma anyị ga-ekwu maka nke a ụbọchị ọzọ ;-)
Jiri akwụkwọ a ị ga-amụta
Egwuregwu Pulse siri ike
Taa na mberede, achọtara m akwụkwọ ESO Design na Technology nke James Garratt si Akal Ediciones. ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Peeji1 Peeji2 Ọzọ →